TUTIANG MIN AUNG HLAING NIH ATHAHMI MINUNG HI VUN ZOHTUAH UH – The Chinlung Post
Kawlralkap nih nawlngeihnak or uknak an lak hnu ah civil minung an thahmi hna cu tuksum asi ko cang. Thlakhat ah mah vialte minung nunnak aliammi hi cu ee, apoi ti lengin chim dingdangaum ti lo. Kawlralkap nih February nikhat in nawlngeihnak an lak hnu ah kawlralkap le palek hna nih mipi an thahmi cazin an vun langhter mi cu atam taktak asi ko. Tutan ah langhter lo mi zeimawzat zong an um rih lai tiah an ruah.
Ralkap nih uknak an lak hnu ah ramchung mipi hna cu biatak tein lamzawhnak an tuah i, nunnak aliam lengluang ko nain mipi hna cu thihnun ruat loin rampi tthatnak ding caah tiah biatak tein an cawlcang. Nunnak ralkap le palek nih an lak mi ahmasabik mi ni le caan cu february niriat khan asi. February niriat in tuchun march nithum tiangahanunnak aliammi cu atanglei bangin an langhter.
Nunnak aliammi konghe pehtlaiin RFA thawngzamhnak nihalanghter ning cun ralkap nih uknak an lak hnu ahanunnak aliammi kawlralkap le palek kahnak ruangahathimi hna hi minung sawmnga an si cang tiah alanghter. Hi chungah nizan ah pasalttha Kalaymyo ahanunnak aliammi zong aitel. Nizan ahanunnak aliammi hi ahmasa bikasi i, amah he telh cun minung sawmnga le pakhat an nunnak liam cang.
February ni riat hnu A nunnak aliammi hna cu, ၁။ ကိုကိုဦး (ခ) ကိုနပွား (၃၂ နှစ်) မန္တလေး, February9(ဖေဖော်ဝါရီ ၉), ၂။ မမြသွဲ့သွဲ့ခိုင် (၁၉ နှစ်) နေပြည်တော်, February 10 (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်) , ၃။ မောင်နေနေဝင်းထက် (၁၈ နှစ်) မြိတ်မြို့, February 20 (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်), ၄။ မောင်ဝေယံထွန်း (၁၇ နှစ်) မန္တလေး, ၅။ ကိုကြည်စိုး (၄၈ နှစ်) မန္တလေး, ၆။ ကိုသက်နိုင်ဝင်း (ခ) ကိုမင်းမင်း (၃၇ နှစ်) မန္တလေး, ၇။ ကိုတင်ထွဋ်ဟိန်း (၃၀ နှစ်) ရွှေပြည်သာ၊ ရန်ကုန်, February 24 (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်), ၈။ ကိုရာဇာအောင် (၂၄ နှစ်) မန္တလေး.
February 28 (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်), ၉။ ညီညီအောင်ထက်နိုင် (၂၃ နှစ်) လှည်းတန်း၊ ရန်ကုန်, ၁၀။ ဇင်လင်းထက် (၂၀ နှစ်) လှည်းတန်း၊ ရန်ကုန်, ၁၁။ ဒေါ်တင်နွဲ့ရီ (၅၉ နှစ်) ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရန်ကုန်, ၁၂။ ဟိန်းထွဋ်အောင် (၂၃ နှစ်) သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ရန်ကုန်, ၁၃။ ကြည်လှိုင်မင်း (ခ) ခေါင်းကြီး (၁၈ နှစ်) ပဲခူး, ၁၄။ စည်သူစိုး (ခ) ကိုစိုး (၁၇ နှစ်) ပဲခူး, ၁၅။ ကိုနေလင်းဦး (ခ) ကိုနေမျိုးဦး (၃၄ နှစ်) ပခုက္ကူ, ၁၆။ ကိုလွင်လွင်ဦး (၃၃ နှစ်) ထားဝယ်, ၁၇။ ကိုဖေသန်း (ခ) နောင်ငို (၃၈ နှစ်) ထားဝယ်, ၁၈။ ကိုဗညားအောင် (၃၉ နှစ်) ထားဝယ်, ၁၉။ ကိုသန်းဝင်း (၃၆ နှစ်) ထားဝယ်, ၂၀။ ကိုမောင်မောင်ဦး (၄၀ နှစ်) မန္တလေး, ၂၁။ ကိုကျော်ထက်ခေါင် (၂၈ နှစ်) မန္တလေး, ၂၂။ ရမ္မဇာန်ဘီ (ခ) မဒေစီ (ခ) အပု (၃၂ နှစ်) မန္တလေး, ၂၃။ မောင်ဇင်မျိုးသူ (ခ) ရရှစ်ဟာ (၂၁ နှစ်) မော်လမြိုင်.
March2(မတ်လ ၂ ရက်), ၂၄။ မောင်သီဟဇော် (ခ) နောင်နောင် (၁၆ နှစ်) တောင်တွင်းကြီး. March3(မတ်လ ၃ ရက်), ၂၅။ မကျော့နန္ဒအောင် (၂၅ နှစ်) – မုံရွာ, ၂၆။ မောင်မင်းခန့်ကျော် (၁၇ နှစ်) – မုံရွာ, ၂၈ ။ ကိုဇော်သိန်းအောင် (၂၀ နှစ်) – မုံရွာ, ၂၉။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဇင် (၃၆ နှစ်) – မုံရွာ, ၃၀။ ကိုမိုးအောင် (၂၃ နှစ်) – မုံရွာ, ၃၁။ကိုနိုင်ဝင်း (၄၅ နှစ်) – မုံရွာမြို့, ၃၂။ (စုံစမ်းဆဲ) – မုံရွာမြို့, ၃၃။ (စုံစမ်းဆဲ) – မုံရွာမြို့, ၃၄။ ကိုမျိုးနိုင်လင်း (၃၉ နှစ်) – မန္တလေး, ၃၅။ မကြယ်စင် (၁၉ နှစ်) – မန္တလေး, ၃၆။ မောင်ထက်ဝေထူး (၁၉ နှစ်) – မော်လမြိုင်, ၃၇။ ကိုဇင်ကိုဇော် (၂၁ နှစ်) – မြင်းခြံမြို့, ၃၈။ ကိုအောင်မြင့်မြတ် (၂၀ နှစ်) – စလင်းမြို့, ၃၉။ ကိုထက်စိုး (၂၆ နှစ်) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၀။ ဖိုးချစ် (၂၂ နှစ်) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၁ အာကာစိုး(၂၅ နှစ်) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၃။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၄။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၅။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၆။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၇။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၈။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၄၉။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၅၀။ (စုံစမ်းဆဲ) – မြောက်ဥက္ကလာပ, ၅၁။ ကိုဇင်မျိုးမောင်(၁၈နှစ်)- ကလေးမြို့.
Kawlralkap Bialehnak Hi Relcio Tuah Uh, Lungrawk Bak Asi Ko. Kawlralkap nih UN bia an lehnak cu khuaruahhar asi ko cang. Ralkap cozah nih an timi cu phihkarnak or dantatnak cu kan tuar khawh tuk, hawittha ram tlawmpal he kan kal peng ko lai tiah fiang ko lehnak an tuah hna. Hi konghe pehtlaiin Nizan ah khan UN Special envoy to Myanmar Ms, Schraner Burgener nih Virtual press conference ah biaachim. Cu ahachimmi cu ralkap nih nawlngeihnak cozah an lak i, ralkap cozah lutlai bikavun changasimi Deputy commander in chief, Vice Senior General Soe Win he phone in chawnh or biaruahnak kan ngei.
Cu i chawnh biaknak ahatimi cu nawlngeihnak nan lak ruangah hin ramdang dang hna phihkharnak nan tong kho mi asi tiah kawlram cozah cuahrocer hna.Hi bia hrocernak konghe pehtlaiin kawlralkap cozah nih lehnak an tuah mi cualiamcia caan zongah phihkharnak hna cu kan tuar khawh peng tawn ko. Asinain zeihmanh akan hnursuang lo kan dir kho tuk tiah lehnak an tuahnak kongachim. Culawng siloin nawlngeihnak lak ruangah hin ram dangdang hna nih an zawmhteih khawh hna tiah ralrinnak zong apek chih hna.Hi ralrinnak konghe pehtlaiin kawlralkap cozah nih lehnak an tuah tthan mi cu hawikom ttha tlawmpal he kan kal peng ningcang cu kan cawn ko lai tiah Vice senior General Soe Win nih lehnakatuah.
Kawlralkap cozah lutlai he aa chawnmi Ms. Schraner Burgener nih hin kawlramadeih khawhnak dingah Tuluk le Russia hi abiapi ngai mi an si.Anmah pahnih nih hin tutan thilcang kong hi theihthiam in rak kan ttuanpi hna seh tihi ka saduhthah or ruahchannak ka ngei tiahachim. Tuchun kawlram thawngpangachuakmi cu ka khuaruah ahar ko tiahachim chih. Ralkap nih nawlngeihnak an lak hnu ah thisenachuak tambik ni le caan asi i, minung sawmthum le pariat nak tlawmlo an nunnak aliam.Nawlngeihnak in tutiang ah hin minung thongkhat le zahnih renglo an telih cang hna.